တားဆေး မသောက်ချင်သော အမျိုးသမီးများ အတွက် - အောင်သက်ခိုင်
Home » ဗဟုသုတ » တားဆေး မသောက်ချင်သော အမျိုးသမီးများ အတွက်
တားဆေး မသောက်ချင်သော အမျိုးသမီးများ အတွက်
ချစ်သူ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်လို. အိမ်ထောင်တစ် ခုထူထောင်ကြ ရာမှာ ကလေးယူမယ်. အချိန်ဟာ နှစ်ယောက် လုံး သဘောတူ ထားတဲ.အချိန်ဖြစ်သင့် သလိုကြို တင်ပြင်ဆင်ပြီး မှရတဲ.ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ဖို.လဲ လိုပါတယ်။ သမီးရည်းစားဘ၀မှာ ဘယ်လိုပဲ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် သိစေကာမူ အတူနေ လင်မယား ဘ၀လောက် ထဲထဲဝင်ဝင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်ထကပြီး ကလေးမယူတာဟာ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက်လေ့လာဖို့ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုတစ်ယောက်က အလိုက် သိဖြည်. ဆည်းပေး နိုင်ဖို့၊ တစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်ကို တစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်ချီးကျူးပေး နိုင်ဖို့ အချိန် ကာလ တစ်ခုကို ရစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန် တားနည်းတွေထဲ ကတစ်ခုခု သုံးဖို့ လိုအပ် လာပါပြီ။ လက်မောင်းထဲ ကိုယ်ဝန်တားတဲ့ ပစ္စည်း(အပ်)ထည့် တာဟာ အခုနောက်ပိုင် ခောတ်စား လာသလိုမြန်မာပြည်မှာ တောင်လုပ်လို.ရနေပါပြီ။ အရင်ကနည်းတွေထက်စာရင်သူ.မှာအားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာ-ထိုးဆေးလို(၃)လတစ်ခါ ရာဝန်ဆီ သွားပြီး ထိုးစရာ မလိုပါဘူး။ သားအိမ် ထဲပစ္စည်းထည်.သလို(IUCD, Intrauterine Contraceptive Device) မိန်းမကိုယ်ကိုအပေါက်ချဲ.ပြီးမှထည်.စရာမလိုပါဘူး။ သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့် တာမျိုးကို ကလေး တစ်ယောက်မှမမွေးဘူးတဲ့ အိမ်ထောင် ကျခါ စအမျိုး သမီးတွေ မလုပ်ချင်ကြ ပါဘူး
၁-၁။ ဘာကို လက်မောင်းထဲ ထည့်ရမှာလဲ
ပရိုဂျက်စတင်(progestin) ဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးဟော်မုန်း ပါတဲ့ မီးချစ်ဆံ အရွယ် လောက်ရှိတဲ့ အချောင်း လး (Implanon) ကိုလက်မောင်း အရေပြား အောက်ထည်.သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါထည်.ထားရင် သုံးနှစ်လောက် ကိုယ်ဝန်တားနိုင်ပါတယ်။ အီစထရိုဂျင် (Estrogen)ဟော်မုန်းပါတဲ.ကိုယ်ဝန်တားဆေး (သောက်ဆေး)တွေနဲ.မတည်.တဲ.သူတွေအတွက် အထူးသင်.တော်ပါတယ်။
လက်မောင်းထဲထည်.ပြီးတာကိုကြည်.ရုံနဲ.မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ်.စမ်းကြည်.လို.တော.ရပါတယ်။သတိပြုဖို.ကတော. လေ.ကျင်.သင်ကြားထားတဲ.ကျွမ်း ကျင်သူတွေနဲ.သာထည်.သင်.၊ထုတ်သင်. ပါတယ်။ ထည်.ဖို. လက်မောင်းကို ဓားနဲ.လှီးစရာမလိုပဲ တစ်မိနစ်အတွင်းအပြီးထည်.နိုင်သလိုနာကျင်မှုလဲမရှိ ပါဘူး။ ပြန်ထုတ်မယ် ဆိုရင်လဲ သုံးမိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။
ဒီနည်းကထိရောက်မှုအလွန်ရှိပါတယ်။ထည်.ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိသူ ၀.၀၅% ပဲရှိ ပါတယ်။
သုံးလခံထိုးဆေးနဲ.ပါဝင်တဲ.ဟော်မုန်းတူပေမယ်. ဒီနည်းကိုရေရှည်သုံးစွဲလို. သွေးပြန်ကြောတွင်း သွေးခဲခြင်း၊ အရိုးသိပ်သည်း ဆလျော.နည်းသွားခြင်းတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. သုတေသန တွေကဆိုပါတယ်။
တခြားပရိုဂျက်စတင် ပါတဲ.ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေလိုပဲ ဒီနည်းသုံးရင် မီးယပ် ငုပ်တာ၊မီးယပ်မမှန်တာဖြစ် တတ်ပါတယ်။
-မီးယပ်အများကြီးဆင်းတာမဟုတ်ပဲ တစ်စက်၊နှစ်စက်နဲ. ပြတယ်ဆိုရုံပဲပြတတ်ပါတယ်။ ထည်.ခါစမှာအမျိုး သမီးတစ်ဝက်လောက် ဖြစ်တတ်ပေမယ်. ခြောက်လအကြာမှာတော.သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတော. တယ်။
-မီးယပ်ဆင်းတဲ.ရက်တွေများလာတတ်ပါတယ်။(၂၀% လောက်မှာဖြစ်လေ. ရှိပြီး ၃လ အကြာမှာတော. ၁၀% လောက် ပဲဖြစ်ပါတော.တယ်။)
-အထက်ပါမီးယပ်သွေးဆင်းမှုမမှန်တာတွေဖြစ်လို. ဗိုက်ထဲမှာသွေးခဲ၊သွေး လုံးဖြစ်တာ စပျစ်သီးသန္ဒေ တည်.မှာတို.ကိုတော.စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်တားပလာစတာဆိုတာ အမျိုးသမီးရဲ.ဗိုက်၊တင်ပါး၊လက်မောင်းရဲ. ပေါ်ပိုင်းအပြင်ဖက် ၊ရင်သားအပါ အ၀င် ရင်သားအပေါ်ပိုင်းတို.ရဲ.အရေပြား ပေါ်မှာကပ်ပြီးသုံးရတာပါ။ သူ.မှာဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပေါင်း စပ်ပါဝင်ပါတယ်။ ပလာစတာကို ခုနှစ်ရက်တစ်ခါအသစ်လဲကပ်ရပါမယ်။သုံးပတ်ဆက်တိုက်ကပ်ရပြီး တစ်ပတ် တိတိမကပ်ပဲနေရပါမယ်။
ကပ်ထားတုန်းကွာကျသွားရင်ချက်ချင်းပြန်ကပ်နိုင်အောင်ကိုယ်ဝန်တားပလာစတာအသစ်တစ်ခုကိုအမြဲဆောင်ထားသင်.ပါတယ်။ လေ.ကျင်.ခန်းလုပ်နေချိန်၊ ရေချိုးချိန်၊ ရေကူးချိန်တွေမှာလဲ ကပ်ထားလို.ရပါတယ်။ ပူနေလို.၊စိုထိုင်း နေလို.၊လေ.ကျင်.ခန်းလုပ်လို. ပလာစတာကွာကျတာမျိုးမရှိပါဘူး။
အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။တစ်ရက်တစ်လုံးသောက်ရတဲ.ဟော်မုန်းနှစ်မျိုး ပေါင်းကိုယ်ဝန်တားဆေး နဲ.တန်းတူလိုက်ပါတယ်။သေချာသုံးမယ်ဆိုရင်လွဲ ချော်မှုနှုန်းက ၀.၃% ပဲရှိပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန် ၁၉၈ ပေါင်အထက်ရှိသူ အမျိုးသမီးတွေသုံးရင် ထိရောက်မှုအနည်းငယ် ကျတယ်ဆိုပေမယ်.ပြောပ လောက် အောင် မဟုတ်ပါဘူး။သူတို.တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော.အခြားနည်းတွေ နဲ.အကျိုးအပြစ် တွေနှိုင်းယှဉ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြားဟ်ာမုန်းနှစ်မျိုးပေါင်းကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေလိုပဲ ဒီပလာစတာ ကြောင်.သွေးအနည်းငယ် ဆင်းတာ၊ကိုယ်အလေးချိန်အတက်အကျဖြစ်တာ၊ အသားအရည်ပြောင်းလဲတာ၊ရင်သားနာကျင် ကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် ပလာစတာကပ်ထားတဲ.အရေပြားတစ်ဝိုက်မှာယားယံတာ မျိုးကြုံတဲ.သူလဲရှိပါတယ်။
ပလာစတာကို ခုနှစ်ရက်တစ်ခါအသစ်လဲပေးဖို.လိုတယ်ဆိုပေမယ်.သူ.ရဲ.အာ နိသင်က ကိုးရက်လောက်အထိခံလို. မေ.ပြီးအသစ်မလဲမိလဲနှစ်ရက်လောက် အပိုဆောင်းပြီး ကိုယ်ဝန်တားပေးနိုင် ပါတယ်။တစ်လမှာပလာစတာသုံးခု လောက်ပဲကပ်ပေးဖို.လိုတဲ.အတွက် အချိန်မှန်သုံးပေးဖို. မခဲယဉ်းပါဘူး။
ကိုယ်ပလာစတာကပ်ထားတာကို အမျိုးသားအဖော်ကသိနိုင်ပါတယ်။ လက်မောင်းမှာ ကပ်ထားရင်တစ်ခြား သူ စိမ်းတွေ ပါသိနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားနဲ.ဓာတ်မတည်.တာ၊ကပ်ထားရင်းကွာကျတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ နှစ်မျိုးပေါင်း ကိုယ်ဝန်တားဆေးလိုပဲ သွေးခဲစေမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းငယ် မြှင်.တတ်စေပါတယ်။
-ပလာစတာကို သန်.ရှင်းပြီးခြောက်သွေ.တဲ. ဗိုက်၊တင်ပါး၊လက်မောင်းအပေါ် အပြင်ဘက်၊ရင်ဘတ်အပေါ် ပိုင်းကအရေပြားပေါ်မှာပဲကပ်သင်.ပါတယ်။ပွတ်တိုက်မှုများတဲ.နေရာမျိုးမှာတော.မကပ်သင်.ပါဘူး။ဥပမာ-ဘရာစီရာကြိုးရဲ.အောက်မှာပေါ.။
-ပလာစတာကိုခုနှစ်ရက်ပြည်.လို.ခွာပြီးရင် ဟော်မုန်းတွေတစ်ခြားပြန်.မသွား အောင် ခေါက်ပြီးမှအမှိုက်ပုန်းထဲထည်.ရပါမယ်။မြေကြီးထဲနဲ. ရေမြောင်းရေတွင်းတွေဆီ ဟော်မုန်းပျံနှံ.မသွားအောင် အိမ်သာထဲကို မစွန်.ပစ်သင်.ပါဘူး။
-ရာသီသွေးစလာတဲ.ပထမဆုံးရက်မှာ ပလာစတာစကပ်ရင် ကွန်ဒုံးပါတွဲသုံး စရာမလိုပါဘူး။
-ပလာစတာကွာသွားရင်ချက်ချင်းကပ်ပေးဖို.လိုပါတယ်။ ၂၄ နာရီကျော်မှပြန် ကပ်နိုင်ရင်တော. တစ်ခြားတား ဆေးတစ်နည်းနည်း ဥပမာ-ကွန်းဒုံးကိုခုနှစ် ရက်လောက်တွဲသုံးဖို.လိုပါတယ်။
Posted by War war war.lovely at 1:00 PM